Ny mpandika lalàna Celine Dion NuNuNu 'New Order' ("gender neutral"): Martin Vrijland
Ny mpandika lalàna Celine Dion NuNuNu 'New Order' ("gender neutral")
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 1 Febroary 2019	• 6 Comments
Ao amin'ny lahatsary Youtube etsy ambany, azonao jerena ny mpandika-teny Celin Dion momba ny tariby mpaninjàny vaovao ho an'ny ankizy miaraka amin'ny soratra 'New Order'. Raha mijery io horonantsary io ianao dia afaka mahita eto ary misy ny sasany mirehitra ny hazavana. Izany no teknikan'ny famaritana fohy ao ny lahatsoratra teo aloha, izay ny fandaharam-pampianarana subliminal dia alefa any amin'ny manodidina anao. Amin'izao fotoana izao, tsy dia mampidi-doza kokoa ny sainao amin'ny vidim-piainana ambany noho ny fijerena sarimihetsika YouTube (ankoatra ny ny fitsipika sivana novolavola), fa koa amin'ny ambaratonga ambony dia manjary miharihary hatrany ny fomba fiteny.
Celine Dion dia manosika mazava tsara ny fombam-pivavahana Lozisiana New World Order izay mikatsaka ny tsy hananan'olon-tokana. Nahoana aho no Losifera, manana aho ireo lahatsoratra ireo nanazava. Mbola mamaky izany ve ianao mba hahafantaranao tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny avana, ny fivavahana ary ny làlan'ny lalànan'i Losifera maniry.
Celine dia mijery foana ny masoko ary izany no mahatonga ahy mieritreritra fa misy olona miafina miafina kokoa noho ny eritreretintsika. Tsy vitanao ny manao izany ho sarotra, mifantoha fotsiny amin'ny fijery ny vatana sy ny tarehy olona. Ohatra, miantso an'i Christine LaGarde amin'ny FMI aho na mijery azy fotsiny ity lisitra ity olona mpandika teny tsara.
Azonao atao ny milaza fa tsy misy maharatsy ny fironana (aleoko miantso azy io ho fampielezan-kevitra) ny fitovian'ny lahy sy ny vavy. Raha ny marina, marina daholo ve isika? Ny biolojia, araka ny tokony ho izy, mazava ho azy, dia mila ny foto-kevitra momba ny lahy / vavy ho an'ny famokarana ary ny karazam-borona rehetra dia miantoka fa samy hafa ny lehilahy sy ny vehivavy. Ankehitriny dia afaka mampifanaraka izany amin'ny teknolojia "fandrosoana" isika. Ohatra, efa azo atao ny mametraka lehilahy ao an-kibo ary mitondra vohoka. Ny fitsaboana hormonina sy ny fomba fikarakarana ara-batana dia afaka manova ny lehilahy amin'ny vehivavy sy ny mifamadika amin'izany. Ny hevitra ao ambadik'izany dia ny fahafahanao mahatsapa vehivavy iray ao amin'ny vatan'ny lehilahy na lehilahy iray ao amin'ny vatan'ny vehivavy. Ny fanontaniana lehibe mitranga dia ny hoe: moa ve isika tsy mamaly fotsiny ny vokatry ny fampiroboroboana "fampandrosoana" amin'ny fahagagana?
Raha mandoto ny tontolo iainana amin'ny plastika sy ny ranomasina, trondro, rano fisotro madio sy ny sisa farany feno miaraka PCBs mahakasika ny hormonina fampandrosoana ny foetus ao am-bohoka ny vehivavy (jereo ny ity tafatafa ity), No nandravana "krômôzôma-jiro", izay toa sahiran-tsaina, dia mety ho isika rehefa mifandray amin'ny manaraka ny fironana (ankoatra ny hafa) fandotoana. Izany dia tsy maintsy mamorona fahiratan-tsaina. Ndao hatrehina izany: raha hanana tany an-kibo (angamba noho ny fandotoana) ara-batana ny ankizivavy (na angamba mazava mihitsy aza), fa ara-tsaina ny zaza (na ny mifamadika amin'izany), dia mahagaga fa misy ny maha-olana. Amin'izay tranga toy izany dia azonao tsara ny fomba fitsaboana iray. Saingy rehefa mandefitra amin'ny vokatry ny fahalotoan'ny tontolo iainana isika, dia mety mila mamaha ny olana aty am-piandohana ary tsy manitsy ny vokany.
Ny statistika dia mety ho betsaka kokoa ny zaza teraka izay miteraka olana ara-tsosialy. Ny fanontaniana anefa dia ny hoe tokony hamporisika anao ve izany ary raha tokony handrisika ny fanavaozana ianao? Moa ve tsy izany no mitarika ho amin'ny krizy mafy kokoa ary tsy miteraka zaza tsy ampy taona manandevo ny hormones sy ny fanafody? Inona no tsindry ara-pihetseham-po mahatonga ny fanavaozana toy izany ary inona no voka-dratsiny? Raha ny fijeriko anefa dia misy zavatra hafa mandeha. Tsy lohahevitra iray izay nipoitra avy amin'ny fangoraham-pony amin'ireo ankizy manana olana momba ny maha-lahy sy vavy; Fampielezan-kevitra izany. (Vakio misimisy kokoa eo ambanin'ny sarin'i Celine Dion)
Tokony hampandroso ny transsexuel. Afaka manaporofo mihitsy aza isika fa ny taona fampiroboroboana plastika sy fampihetseham-po tsy misy fepetra dia niniana natao avy any ambony, satria efa fantatra ny vokatr'izy ireo. Raha efa namaky lahatsoratra momba ny fifandraisana misy eo amin'ny avana, ny transgenderism ary ny lisitry ny lisansa ianao, dia mety ho hitanao fa ny tontolo dia mifanaraka amin'ny master script nalefa tany amin'ny governemanta iray manerantany eo ambany fitarihan'i Losifera. Izany hoe, ilay Andriamanitra miafina ao ambadiky ny fivavahana dualista (god / satan), izay mivoaka avy any ivelany. Ary raha misy ny script, dia misy ny fanaraha-maso azo antoka.
Fianarana lalina kokoa (ao amin'ny lahatsoratra momba ity toerana) dia mampiseho aminareo fa tsy transgenderism hisy ihany azo antoka fa samy ny fiterahana sy ny fanabeazana mitombo hatrany ny miovaova manoloana ny fanjakana (Brave New World, Aldous Huxley), fa izany no vestibule ho an'ny transhumanism. Samy ahitana ny teny hoe 'trans' amin'ny teny hoe transformation. Ny Luciferian izao tontolo izao mba tsy mitady ny tsy mety maty ny olona (ianao manaiky fa ny fivavahana sy ny "fiainana mandrakizay"?), Fa koa mikendry ny hanova ny olona ho cyborgs. Izany no fiandohana voalohany, satria ny tanjona faratampony dia ny Singularity. Izany no nofinofin'ny mpandraharaha teknika Google, mpamorona, mpanoratra ary mpandraharaha maneran-tany ary mpanohana ny transhumanism: Ray Kurzweil. Ny singulony dia ny fampifangaroana ny fanahin'ny olona amin'ny tsipika fanenana (ao amin'ny rahona mazava). Vakio misimisy kokoa ao anatin'ilay sary mahafinaritra ireo ankizy tsy manambady.
Koa raha efa tena liberaly sy ny "fanahy maimaim-poana" ny hanaiky ny lahy sy ny vavy tsy nety nanao miaramila, ary ho hainareo ny na nahy Mampahery ny fironana, satria te mety tsy ho voamarika ho mpandala ny mahazatra, ary tonga hatrany aloha ny fivoaran-draharaha ao amin'ny filaharana, tsarovy fa izao ihany ny lavarangana fidirana dia ny fanandevozana farany izay olona amin'ny atidoha sy ny vatana niova nanotechnologies tokony nahantona amin'ny aterineto. Mihamitombo tsikelikely izany dingana izany, saingy efa manao ny asany tsara ny fampielezan-kevitra. Ny fiovan'ny transsecteur / lahy / vavy dia ny fiandohana. Ny dingana manaraka ho an'ny ny efa voavitrana ny atidoha ho any amin'ny Internet (Elon ny Neuralink Musk ohatra) sy ny fananiham-bohitra nanobot ao amin'ny vatana. Ankoatra izany, dia tena ilaina izy io toy ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao ADN ao anaty tahiry ary ny lalàna momba ny vakisiny dia miantoka fa ny tsirairay dia mila manaiky handray fanapahan-kevitra. Ny fomba famokarana jenetika izay mifototra amin'ny CRISPR-CAS fomba dia azo fehezina avy amin'ny rahona ary ny nanobotsina dia afaka miomana amin'ny rà rehetra.
Tsara ny mahafantatra fa mitovy ihany koa ny lehilahy sy ny vehivavy. Azo takarina ihany koa raha takatrareo ny ankizy izay mandalo olana ara-tsaina. Fotoana izao hijerena fotsiny izao fa tsy resaka fahatakarana intsony izany, fa isika dia miatrika fampielezan-kevitra mafy orina. Ary mbola ho tsy manan-tsiny io fampielezan-kevitra io raha tsy hitanao hoe inona no ho avy. Manangona ny fasanay manokana izahay manoloana ny fanandevozana nomerika feno.
Raha raisinao ny zava-manahirana ka voadio ao anatiny, dia azonao atao ny mahatsapa fa ilaina koa ny mizara lahatsoratra toy izany eo amin'ny fianakavianao, na namana na olom-pantatrao. Hazavao amin'izy ireo fa zava-dehibe ny mamaky tsara sy mamaky ireo lahatsoratra fototra rehetra.
Lisitry ny rohy loharano: zerohedge.com
Ny tsy fanarahan-dalàna vaovao dia tsy voajanahary (na ny fomba hafa manodidina?)
"Ny vehivavy rehetra dia vehivavy, afa-tsy ny reninao" ary ny adihevitra #MeToo
Fitsarana ao Limbourg: fotoana hanaovana sonia ny fizarana fahatelo, 'mpametavoka ny lahy sy vavy'
Tags: Celine, Dion, Featured, lahy sy ny vavy, gender neutral, olana ara-tsosialy, fitafiana ankizy, fitafiana akanjo, NuNuNu, fiovana, transgender
1 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 53
Mino koa aho fa efa nisy foana (na kely). Raha tsy nomena ny fanazavana marina, dia handalo izany araka ny hitantsika ireo andro ireo. Araka ny efa nosoratanao tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, isika dia voatahiry mandritra ny andro. Taloha dia nanao izany izy ireo tamin'ny famoronana endri-pamokarana ho an'ny toriteny ary ankehitriny dia afaka mijanona ao an-trano ianao. Tonga miaraka amin'ireo lahatsoratra izay tsy manameloka ianao fa manazava fa ny gripa dia ao anatin'ny familiana. Raha tsy hitanao izay fomba handehanantsika ankehitriny, dia jamba ianareo.
Teo aloha tsy nisy tsy hifoha va izay Bert sy Ernie dia niaraka nipetraka, izao no antsakany sy andavany izy ireo nanazava fa mbola ireo pelaka sy ny mety ireo fa mbola atao hoe Ernie Annie. Ankoatra izany, izy ireo dia aoka isika efa zatra tsy nisy afa-tsy iray tany Smurfenland Smurfette ary handre fa tsy ho ela ny lahy sy ny vavy sisa no tsy nety nanao miaramila.
Ny fandaharana iray isam-barotra dia tsy maintsy mijanona, mijanona fotsiny aorian'ny fisainana ary tsy ekeny ny zavatra atolotra.
Tsy aretina nomanina tahaka izao ianao, satria isika no voatendry amin'ny toetra sasany. Tsy mora ny miala amin'izany, fa azo antoka fa tsy ho vita mihitsy.
Amin'ny farany, TSY MISY isika ary afaka mifantoka kokoa amin'ny fandrosoana ara-tsaina noho ny fandrosoana ara-batana ary ny atidoha koa dia ampahany amin'izany.
Long maharitra nanoratra hoe:
1 Febroary 2019 ao amin'ny 23: 28
Fandinihana tsara. Inona no ifandraisan'izany amin'ny agenda 2030 ????
Fanontaniana iray monja!
2 Febroary 2019 ao amin'ny 23: 51
Tahaka ny valiny?
3 Febroary 2019 ao amin'ny 00: 38
Ny zava-drehetra dia misy ifandraisany amin'ilay soratra voalaza etsy ambony ary ny fandaharam-potoana aseho amin'ny sehatra hita maso dia mazava ho azy amin'izany.
Mivoatra ianao raha manana hevitra sy fotoana ao amin'ireo lahatsoratra mifandraika amin'ny lahatsoratra etsy ambony. Raha ny hevitro dia zava-dehibe ny mamantatra ilay script.
Rrrene nanoratra hoe:
3 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 38
Nataoko sary an-tsoratra iray avy amin'ny clip-n'i Nununu aho. Tohina aho.
Hanoratra aminao ve aho? Azonao atao ny mametraka ny sary ary mametraka ny fanontaniana amin'ny mpihaino anao momba izay tena azo jerena.
4 Febroary 2019 ao amin'ny 00: 57
« Mijery tele na sarimihetsika na sarimihetsika isan'andro ve ianao? Avy eo ianao dia feno ny hypnosis ary tsy matotra
Manana iray hafa isika: ny Holandey niova ho Islam, mpanao politika PVV (AIVD-er) Joram van Klaveren »
Total visits: 8.605.887
Evert Jan Poorterman sy ny maha-ambony sy ny fahalalana 'momba an'i Nibiru sy Annunaki
Rehefa manomboka ny media sosialy na ny aterineto ny governemanta raha misy ny fanafihana (toy ny any Sri Lanka), efa fantatrao tsara izao
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM op Rehefa manomboka ny media sosialy na ny aterineto ny governemanta raha misy ny fanafihana (toy ny any Sri Lanka), efa fantatrao tsara izao
Camera 2 op Rehefa manomboka ny media sosialy na ny aterineto ny governemanta raha misy ny fanafihana (toy ny any Sri Lanka), efa fantatrao tsara izao
Martin Vrijland op Rehefa manomboka ny media sosialy na ny aterineto ny governemanta raha misy ny fanafihana (toy ny any Sri Lanka), efa fantatrao tsara izao
Wilfred Bakker op Rehefa manomboka ny media sosialy na ny aterineto ny governemanta raha misy ny fanafihana (toy ny any Sri Lanka), efa fantatrao tsara izao
Mifandraisa anjara amin'ny 1.580 hafa